Barcelona Oo Rikoodh Cusub Ku Dhigtay Ciyaar Ay Dhibcaha Ka Tirsatay Valencia
HomeAfricaWararka Somaliga AhBarcelona Oo Rikoodh Cusub Ku Dhigtay Ciyaar Ay Dhibcaha Ka Tirsatay Valencia
Barcelona ayaa dhigtay rikoodh cusub oo horyaalka LaLiga ah, kaddib markii ay ka dul-tallaabsatay Valencia oo ay kusoo dhoweysay garoonka Camp Nou, waxaanay ay diiwaangashatay kulankii 39aad oo xidhiidh ah oo aan laga badinin.
Barcelona oo toddobaadkii hore si lama filaan ah uga hadhay tartanka Champions League oo ay Roma ku dhigtay wacdaro ay muddo dheer xasuusnaan doonto, ayaa waxay awooddeeda iskugu geysay horyaalka, halkaas oo ay 14 dhibcood ka sare martay Atletico Madrid oo kusoo xigta.
Luis Suarez ayaa Barcelona u dhiibay hoggaanka ciyaarta daqiiqaddii 15aad, hase yeeshee qaybtii labaad ayaa ay guusheeda sii adkaysatay markii uu Samuel Umtiti madaxa ku dhaliyey kubbad koorne ahayd oo uu soo laagay Philippe Coutinho.
Ciyaarta ayaa ku socotay 2-0 illaa laga gaadhayey daqiiqaddii 87aad markaas oo Dani Parejo uu dhaliyey rikoodhe lagu qabtay Barcelona, waxaana uu ku yimid gool ku laaggu khalad uu Ousmane Dembele ku galay Andreas Pereira oo ku jira diillinta goolka Barca hortiisa.
Valencia ayaa ku dhowaatay inay hesho goolka barbar dhaca, gaar ahaan kubbad gantaal ahayd oo uu Rodrigo ku liishaamay iyo mid kale oo uu ula tegay Carlos Soler, kuwaas oo uu ka badbaadiyey goolhaye Ter Stegen oo sidoo kale ku dhowaaday inuu qabto kubadda rikoodhaha ahayd ee laga dhaliyey.
Guushan waxay Barcelona siisay rikoodh ah in aan laga badinin kulankeedii 38aad oo xidhiidh ah, waxaanay sidaas ku jebisay rikoodh ay Real Sociedad dhigtay xili ciyaareedkii 1978-79 iyo 1979-80.
Barcelona waxay ku dhow dahay inay gacanta ku dhigto horyaalka oo ay ka hadhsan yihiin lix ciyaarood, waxaanay u baahan tahay toddoba dhibcood oo kaliya.